Mihaza olona ny miaramila: Misy ny mpitari-tolona voasambotra | Hevitra MPANOHARIANA |
Mihaza olona ny miaramila: Misy ny mpitari-tolona voasambotra
2009-04-22 @ 21:05 in Politika
16:35: Araka ny nolazain'ny radiomada dia nisy ny loholona sy ny depiote no nosamborin'ny Capsat teny Ambanidia. Anisany ny Loholona Rabenatoandro Lanto mpitari-tolona avy any Antsirabe.
15:30 Re fa miditra an-keriny ao amin'ny HJRA miaraka amin'ny baomba lacrymogene indray ny miaramila amin'izao fotoana izao.
Efa hatry ny ela no nanirian'ny mpihaino ny hiditra mivantana ao radio mada Antananarivo hifampahery amin'ny tolona ataony. Androany alina izany ao tanteraka ary dia tsy misy mihitsy ny fotoana very aloha hatramin'izay nanombohany nampiditra mpihainoizany fa dia toy ny hoe ny mpihaino fotsiny nomameno ny fotoana rehetra, hatramin'izao dia tsy nisy nibodo fotoana fa miezaka manafohy ny resany avokoa ny rehetra. Raha toa moa ianareo any Ivelan'i Madagasikara te-hiantso ihany koa dia omeko anareo ihany ny laharana azo iantsoana azy dia ny (+261) 33 28 500 41, laharana tokana ihany. Marihina fa efa hatry ny ela kosa ny radio mada Antsirabe no efa nampiditra ny feon'ny mpihaino ka mety ho mampafana ny tolona ao amin'io tanàna io izany toe-javatra izany.
Te-hanoratra mihitsy aho fa mamely ahy ny torimasoko, ary tsikaritro ihany koa fa mitady hitovy ny ora hamakiana ny vaovao rehetra famakiko avy amin'ny hafa sy ny ora laniko hanoratana izay vaovao fantatro ho anareo. Ny tiako asongadina aloha dia ny herimpon'ny olona niari-tory indrindra fa ny tanora nanatrika ilay maritiora nitondra ny anarana hoe "Randriamanjato Richard" nandritra ny alina ao anatin'izao hatsika be tampoka teto amin'ny tanàna izao, nefa dia any ivelan'ny trano no niareta-tory. Miaiky anareo rehetra izay niari-tory aho fa na hatsiaka na moka dia niaretanareo tao avokoa mandra-piposaky ny masoandro. Mari-pitiavana tena goavana no vitanareo ka dia mirary soa anareo rehetra indrindra.
Farany sahady fa mamely dia mamely ny torimaso, fa maninona ho'aho no tsy misy mpanao gazety mahasahy manontany an'Atoa Randriamanjato Richard Mahitsison, hoe ahoana ny fihetseham-ponao amin'izao misy olona nametraka ny anaran-janany tamin'ny anaranao nefa dia maty nitolona tany amin'ny vondron'olona manohitra ny zanakao amin'izao fotoana izao? Mba ampitampitaiko fandrao mba misy mpanao gazety afaka manontany iny mpitandrina iny ihany!
jentilisa, 22 avrily 2009 tamin'ny 23: 05
Araka ny re ao amin'ny radio fahazavana sy ny radio mada Antananarivo dia manenjika sy mitifitr'olona manerana an'Antananarivo ilany atsinanana ankehitriny ny miaramila. Ambohijatovo, Ankazotokana, Ambatonakanga, Mahamasina, Anosy, Ambanidia no fantatra aloha hatramin'izao hanenjehana sy itifiran'ireto miaramila ireto ny olona. Nisy toerana telo aloha no nolazaina ho fihaonan'ny mpanohana ny ara-dalàna dia Ankazotokana, Prinz Hotel ary Ankadimbahoaka... tsy mbola nandrenesam-baovao aloha ny any amin'ny faritra hafa. Efa nisy tovolahy iray indray no voatifitra teo amin'ny lohany ary efa mihoatra ny folo ny maratra. Ny eny Andrefan'Ambohijanahary koa dia voalaza (araka ny radio mada) fa ampidirina an-toby ireo olo-tsotra voasambotra, maratra ary maty. Heno moa fa nisy famoriana miaramila Malagasy sy Frantsay eny amin'ny Mess Betongolo io atoandro io... inona no nokonokononina tao?